bafuna uhulumeni angakhethi iphela emasini kwezobuciko - Ilanga News
Home Izindaba bafuna uhulumeni angakhethi iphela emasini kwezobuciko
bafuna uhulumeni angakhethi iphela emasini kwezobuciko
AFUNA kungakhethwa iphela emasini amaciko emihlomulweni kahulumeni, wokunxephezela abahleli bemicimbi obekumele bayenze njengoba kuphazamiseke ukusebenza kwezwe ngobhubhane i-coronavirus.
Inhlangano engayezi inzuzo, iCultural and Creative Industries Federation of South Africa, isiphu-mele obala kwelokuthi kumele babhekelelwe nabahleli bemici-mbi ebingenaso isivumelwano sokusebenzisana nohulumeni kuzwelonke.
Usihlalo wale nhlangano KwaZulu-Natal, uThokozani “T’zozo” Zulu, uthi imicimbi emi-ncane nayo iyingxenye ekuhlomu-liseni amaciko. Utshele ILANGA ukuthi lesi sinqumo sidinga ukubuyekezwa. Ukusho lokhu nje, ungqongqoshe wezamasiko namaciko kuzwelonke, uMnu Nathi Mthethwa, uthe kuzokhi-shwa u-R150 million ozonikwa abebezokwenza imicimbi ebixhaswe wumnyango wakhe, abaphazanyi-swe yilesi sifo.
“Kumele kuhlomule wonke umuntu onobufakazi bokuthi kunomcimbi abewuhlela. Maningi kakhulu amaciko aphiliswa yimali ayihlomula emicimbini engaxhasiwe kuzwelonke,” kusho uT’zozo.
Kwenzeka lokhu nje, abanye abahleli bemicimbi sebekhale ngesikhathi esiwumnqamulajuqu esibekwe wuhulumeni ukuba kuthunyelwe izicelo zokunxeshezelwa. Kuvalwa namuhla ngoMsombuluko. Omunye wabahleli ocele ligodlwe igama lakhe, uthi kazikho izinsiza kusebenza ezindaweni zasemakhaya okwenza kube nzima ukuthumela izicucu ezidingekayo.
UMnu Mthethwa uthe umnyango uzofaka isandla kubahleli bemicimbi abebenezivumelwano nomnyango wakhe. Kuzohlomula abazothumela nezinkontileka zabo obekuvunyelenwe ngazo.
Previous articleUsephokophele ubukapteni emkhunjini omkhulu
Next articlekunconywa olokufundisa u-matric emsakazweni